Забур 136 CARS - Nnwom 136 ASCB
1Monna Awurade ase na ɔyɛ.
Nʼadɔeɛ wɔ hɔ daa.
2Monna anyame mu Onyankopɔn ase.
4Ɔno nko ara na ɔyɛ anwanwadeɛ akɛseɛ.
5Ɔno na ɔfiri ne nteaseɛ mu bɔɔ ɔsoro.
6Ɔno na ɔtrɛɛ asase mu de kataa nsuo so.
7Ɔno na ɔbɔɔ nkanea akɛseɛ no.
8Ɔbɔɔ owia sɛ ɛnni adekyeeɛ so.
9Ɔbɔɔ ɔsrane ne nsoromma sɛ wɔnni adesaeɛ so no.
10Ɔno na ɔkunkumm Misraimfoɔ mmakan,
11na ɔyii Israelfoɔ firii wɔn mu no.
12Ɔde nsa kɛseɛ ne basa a watene mu.
13Ɔno na ɔpaee Ɛpo Kɔkɔɔ no mu no,
14na ɔde Israelfoɔ faa mfimfini no.
15Nanso, ɔpraa Farao ne nʼasraafoɔ guu Ɛpo Kɔkɔɔ mu no.
16Ɔno na ɔdii ne nkurɔfoɔ anim wɔ ɛserɛ no so.
17Ɔno na ɔkumm ahemfo akɛseɛ no,
18na ɔkumm ahemfo akunini no.
19Ɔkumm Amorifoɔ ɔhene, Sihon,
21Na ɔde wɔn nsase maa sɛ agyapadeɛ.
22Ɔde maa ne ɔsomfoɔ Israel sɛ agyapadeɛ.
23Ɔkaee yɛn, yɛn mmerɛyɛ mu.
24Na ɔgyee yɛn firii yɛn atamfoɔ nsam.
25Ɔno na ɔma abɔdeɛ biara aduane.
26Monna ɔsorosoro Onyankopɔn no ase.
ASCB : Nnwom 136